အကောင်းဆုံး CBD Patches ၅ ခု၊ သင်၏ ၀ ယ်သူလမ်းညွှန် (၂၀၂၁) - ကျန်းမာရေး | ဇွန်လ 2022
ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ဆီးဂိမ်း ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ ပြင်းထန်သောအားကစား အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ရပ်ရွာ ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေး ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ကုမ္ပဏီသတင်း ဖျော်ဖြေရေး
အဓိက >> ကျန်းမာရေး >> အကောင်းဆုံး CBD Patches ၅ ခု၊ သင်၏အလွယ် ၀ ယ်လမ်းညွှန် (၂၀၂၁)
အကောင်းဆုံး CBD Patches ၅ ခု၊ သင်၏အလွယ် ၀ ယ်လမ်းညွှန် (၂၀၂၁)
CBD patch များသည် CBD ယူရန်အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်၏အရေပြားပေါ်တွင်တစ်ခုကပ်ရုံနှင့်နာရီပေါင်းများစွာသက်သာစေသည်။
ထို့အပြင် CBD သည်သင်၏အသည်းနှင့်အစာခြေစနစ်ကိုကျော်ဖြတ်သောကြောင့် CBD သည်ဆေးတောင့်များထက်ပိုမိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ နာကျင်မှုသို့မဟုတ်အိပ်စက်ခြင်းအတွက် CBD ပြင်ဆင်ရန်ကြိုးစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ယခုရနိုင်သောအကောင်းဆုံး CBD ပြင်ဆင်မှုများကိုရှာဖွေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ။
ယခုရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံး CBD ပြင်ဆင်မှုကားအဘယ်နည်း။
လူမှုရေး CBD Transdermal Patch (၃ ကွက်၊ ၂၀ မီလီဂရမ်စီ)
2x2 'patch တစ်ခုစီတွင် 20 mg slow-release CBD (နှင့် zero THC) ပါ ၀ င်သည်။
စျေးသက်သက်သာသာဖြင့်ရနိုင်သောအထုပ် (ဤ ၃ ထုပ်သို့ ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသူများအတွက်)
စျေးနှုန်း: ၂၀.၉၉ ဒေါ်လာ Social CBD တွင်ယခုစျေး ၀ ယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
လူမှုရေး CBD အပိုအားဖြည့်ဆေးများ (၃ ထုပ်၊ ၃၀၀ မီလီဂရမ်)
2x2 'patch တစ်ခုစီတွင် 100 mg slow-release CBD (နှင့် zero THC) ပါ ၀ င်သည်။
စျေးနှုန်း: ၄၉.၉၉ ဒေါ်လာ Social CBD တွင်ယခုစျေး ၀ ယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
Hearty Heroes Transdermal Patches 3-Pack (50 mg ea ။ )
တတိယပါတီဓာတ်ခွဲခန်းမှတ်တမ်းကတစ်ဖာလျှင် ၅၀ မီလီဂရမ် CBD ကိုအတည်ပြုသည်
ဤ 3-Pack တွင် ၁၅၀ မီလီဂရမ်စုစုပေါင်းပါ ၀ င်သောကြောင့်ဤအချပ်များကိုစျေးသက်သာစေသည်
စျေးနှုန်း: ၄၉.၉၉ ဒေါ်လာ Hearty Heroes တွင်ယခုစျေး ၀ ယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
Green Garden Gold 'PolarX' Patch (၄ ထုပ်၊ ၆၀ မီလီဂရမ်စီ)
patch တစ်ခုစီတွင် CBD ၆၀ မီလီဂရမ်နှင့် lidocaine ၄ ရာခိုင်နှုန်း (ဒေသဆိုင်ရာထုံဆေး) တို့ပါ ၀ င်သည်။
Green Garden Gold သည်သူတို့၏လျှော်ပင်ကိုကော်လိုရာဒိုရှိလယ်သမားများမှ ၀ ယ်ယူသည်
၎င်းသည် 4-pack ဖြစ်ပြီးဤစာရင်းတွင်ပိုစျေးသက်သာသော transdermal patch များဖြစ်စေသည်
စျေးနှုန်း: ၂၉.၉၉ ဒေါ်လာ Green Garden Gold တွင်ယခုစျေး ၀ ယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
CBD Living 'Reservoir' Transdermal Patch (၆၀ မီလီဂရမ်)
သင်၏အရေပြားထဲသို့တိုက်ရိုက်စုပ်ယူရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသော CBD ၏ nano-particles များကိုသုံးသည်
ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များတွင်ဖာတစ်လုံးတွင် CBD ၆၆ မီလီဂရမ်ပါ ၀ င်သည်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်မှီကော်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ၉၆ နာရီကြာအဆက်မပြတ်ဝတ်ဆင်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည် (ဤစာရင်းရှိအခြား patch အများစုထက်များစွာပိုရှည်သည်)
စျေးနှုန်း: $ 15.00 CBD Living တွင်ယခုစျေး ၀ ယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
1. အကောင်းဆုံး 20mg CBD Patch: လူမှုရေး CBD Transdermal Patch (3 Pack; 60 mg စုစုပေါင်း)
စျေးနှုန်း: ၂၀.၉၉ ဒေါ်လာ Social CBD တွင်ယခုစျေး ၀ ယ်ပါ အားသာချက်များ
2x2 'patch တစ်ခုစီတွင် 20 mg slow-release CBD ပါ ၀ င်သည်
ရောဂါပိုးမွှားများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများ၊ လေးလံသောသတ္တုများနှင့်လက်ကျန်ပျော်ဝင်နိုင်သောပစ္စည်းများ (အပြင် CBD ပါဝင်မှု) အတွက် Third party ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများ
Patch သည်အသားကိုမထိခိုက်စေပါ၊ ၎င်းကိုသင်ဖယ်ရှားသောအခါမည်သည့်အမှတ်အသားများကိုမှမထားခဲ့ပါ (ငါကြိုးစားခဲ့သည်)
မင်းမှာအသုတ်အရေအတွက်မရှိသေးတာကြောင့်နမူနာစစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေကိုကြည့်ဖို့ခက်တယ် (ငါတို့က Social CBD ကနေသူတို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်)
THC မပါ ၀ င်ပါ၊ ၎င်းသည်ရောင်စဉ်အပြည့်မဟုတ်ပါ။
တစ်ဖာလျှင် ၂၀ မီလီဂရမ်သည်ဤစာရင်းရှိအခြားဆေးများထက်ပိုနည်းသည်
ဟိ လူမှုရေး CBD Transdermal Patch patch တစ်ခုစီကို ၂၀ မီလီဂရမ် CBD နှင့်ရောနှောထားသောကြောင့်၎င်းသည်ထူးခြားသည်၊ သင်၏ patch ရောက်သောအခါ၊ သင်သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် batch-specific lab ရလဒ်များကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်။
ဤရက်များတွင် CBD ကုမ္ပဏီများစွာသည်တတိယပါတီဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များကိုထုတ်ဝေသည်။ (ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်ပမှဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များဖြင့်ထုတ်ကုန်များကိုသာပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ )
သို့သော်အချို့သော CBD အမှတ်တံဆိပ်များ (Social CBD ကဲ့သို့) သည်၎င်းတို့၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုနောက်တစ်ဆင့်သို့ထုတ်လွှတ်သည် အသုတ်အလိုက် ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ ဤကုမ္ပဏီများသည်သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုတွင်အသုတ်နံပါတ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ထုတ်ကုန်အသစ်မှထွက်လာသောအသုတ်နှင့်ဆက်နွယ်သောစမ်းသပ်မှုရလဒ်များကိုသင်အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်။
Social CBD သည်ဤအလွန်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသောကုမ္ပဏီများတွင်ပါဝင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ထုတ်ကုန်ရောက်သောအခါ၊ သင်၏အတိအကျပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံဤပွင့်လင်းမြင်သာမှု၏နောက်ထပ်အလွှာသည်စားသုံးသူများအတွက်ပြဿနာကိုဖန်တီးစေသည်။ ၎င်းသည်စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကိုကြည့်ရန်ပိုမိုခက်ခဲနိုင်သည် ရှေ့မှာ သင်ထုတ်ကုန်ကို ၀ ယ်သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Social CBD သို့လက်လှမ်းမီ။ ၂၀ မီလီဂရမ်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများအတွက်ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းလက်မှတ် (COA) ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
patch တစ်ခုစီတွင် 22 mg CBD ပါ ၀ င်သော်လည်းအခြား cannabinoids မရှိပါ။ THC မရှိပါ။
Social CBD သည်လက်ကျန်အရည်ပျော်များ၊ mycotoxins၊ လေးလံသောသတ္ထုများနှင့်ပိုးသတ်ဆေးများကိုလည်းစမ်းသပ်နေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ (သင် CBD ကို ၀ ယ်သောအခါ၊ သင်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရရှိရန်သေချာစေရန်သင်၏ဖြန့်ဖြူးသူသည်ဤအလားအလာရှိသောညစ်ညမ်းမှုများကိုသေချာစစ်ဆေးရန်အရေးကြီးသည်။ )
Social CBD သည်ကျွန်ုပ်အားစမ်းသပ်ရန်အခမဲ့ ၂၀ မီလီဂရမ် patch ကိုကျွန်ုပ်အားစေလွှတ်ခဲ့သည်။ မင်း ၂၄ နာရီဝတ်နိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါအိပ်ရာမ ၀ င်ခင်အဲဒါကိုငါ့ခြေဖဝါးထိပ်မှာတင်ထားတယ်။ သွေးပြန်ကြောများစွာရှိသောနေရာသည် transdermal patch အတွက်စံပြဖြစ်နိုင်သည်ဟုငါထင်ခဲ့သည်။ (ထို့ပြင်ခြေဖဝါးသည် ၂ လက်မမှ ၂ လက်မ translucent patch အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်အစားရှိသောနေရာမဟုတ်ပါလား။ )
ငါအရမ်းအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ခြေထောက်က transdermal patch တွေအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ နောက်တစ်နေ့ငါလမ်းလျှောက်တဲ့အခါငါ့ခြေအရိုးနဲ့ကြွက်သားတွေရွေ့လျားသွားရင်ဖာရဲ့အလယ်ဗဟိုကကော်တွေလျော့သွားသလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် patch ကဘယ်တော့မှမပျောက်ဘူး၊ ငါ့ခြေအိတ်အောက်မှာငါ့ကိုအနှောက်အယှက်မပေးဖူးဘူး။ ၂၄ နာရီကြာပြီးနောက်၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်လွယ်ကူပြီး၎င်းတွင်အကြွင်းအကျန်များနှင့်အမှတ်အသားများမကျန်ခဲ့ပါ။ ဒါ့အပြင်၊ နှင်းမုန်တိုင်းတွေအကြိမ်ကြိမ်တိုက်ပြီးကားမောင်းနေတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာငါတော်တော်ကိုတည်ငြိမ်လွန်းခဲ့တယ်။
တကယ်တော့နှင်းမုန်တိုင်းတွေကြားမှာ ၅ နာရီလောက်ကားမောင်းရင်းငါစိတ်တည်ငြိမ်ခဲ့တယ်။ နောက်တော့ငါပျောက်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဖာတာကိုအပြစ်မတင်ပါဘူး။ (၎င်းသည် CBD ဖြစ်သည်၊ Xanax မဟုတ်ပါ။ ) ဤစိတ်ဖိစီးမှုသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းအားဖြင့် ၂၀.၄ နာရီထိထိထိရောက်ရောက်လျှော့ချပေးခဲ့သည်ဟုငါဆိုသည်။ ငါအလွန်အကြံပြုသည်။
ဤ CBD patch သည်ဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်လွှတ်သော CBD ကိုရိုက်ပုတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုမေ့ပစ်ပါ၊ တစ်နေ့တာလုံးခေါင်းအေးအေးနှင့်အဆင့်အတန်းရှိခြင်းအတွက်နောင်တရပါ။ (ဟုတ်ပြီ၊ အများစု နေ့၏။ )
Social CBD Transdermal Patch (၃ ဖာ၊ ၂၀ မီလီဂရမ်စီ) သတင်းအချက်အလက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ပိုမိုရှာဖွေပါ။
2. အကောင်းဆုံးအပိုအစွမ်းသတ္တိ CBD Patch: လူမှုရေး CBD 3-Pack Extra-Strength Transdermal Patch (300 mg)
စျေးနှုန်း: ၄၉.၉၉ ဒေါ်လာ Social CBD တွင်ယခုစျေး ၀ ယ်ပါ အားသာချက်များ
မင်းမှာအသုတ်နံပါတ်မရှိသေးတာကြောင့်နမူနာစစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေကိုကြည့်ဖို့ခက်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းမှာအသုတ်နံပါတ်မရှိသေးဘူး၊ (ငါတို့က Social CBD ကနေသူတို့ကိုတောင်းဆိုထားတာ)
၁၀၀ မီလီဂရမ်သည်သင်လိုအပ်သည်ထက်ပိုအားကောင်းနိုင်သည် (သို့သော်၎င်းတို့အားကတ်ကြေးဖြင့်အလွယ်တကူဖြတ်လိုသည်)
ဒီ ၃ ထုပ်ပါ လူမှုရေး CBD အပိုခွန်အား patch များ patch တစ်ခုစီတွင် 100 mg CBD ပါ ၀ င်သောကြောင့်ထင်ရှားသည်။
Social CBD ကငါ့ကိုစမ်းသပ်ဖို့တစ်ခုလွှတ်လိုက်တယ်။ အစွဲအလမ်းကြီးခဲ့တယ်။ ဒီ patch တွေကိုငါအရမ်းချစ်တယ်။
တစ်ခုလောက်တပ်လိုက်ရုံနဲ့မင်းရဲ့တင်းမာမှုတွေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပျောက်သွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ (၎င်းတို့သည် ၂၄ နာရီခန့်ကြာရှည်ပါကနောက်ပိုင်းတွင်ကောင်းမွန်သောညကိုအိပ်စက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ။ )
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့ကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတတိယပါတီရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်တွေကိုမသုံးဘဲ CBD ထုတ်ကုန်တွေကိုပြန်မသုံးသပ်ဘူး၊ အထုပ်ရဲ့နောက်ကျောမှာ QR ကုဒ်ကိုငါစကင်ဖတ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ် database ကိုခေါ်သွားတယ်။ ငါ့အထုပ်ပေါ်ကစာရေးသားနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးခေါ်သွားတာ ဤတတိယပါတီဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ မရ။
ဤပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများတွင် CBD ၁၂၈ မီလီဂရမ်နှင့်အခြား cannabinoids သုညတို့ပါ ၀ င်သည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
ဓာတ်ခွဲခန်းသည်သေးငယ်သောပိုးမွှားများ၊ လက်ကျန်ပျော်ရည်များ၊ ပိုးသတ်ဆေးများနှင့်သတ္တုများကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ (ဘာကြောင့်ဒီ့ထက်ပိုအရေးကြီးလဲ၊ အော်ဂဲနစ် CBD အဆီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ )
Social CBD Extra-Strength Patches (3 Pack; 300 mg) အချက်အလက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ပိုမိုရှာဖွေပါ။
3. အကောင်းဆုံး ၅၀ မီလီဂရမ် CBD Patch: Hearty Heroes Transdermal Patches (3-Pack; 150 mg Total)
စျေးနှုန်း: ၄၉.၉၉ ဒေါ်လာ Hearty Heroes တွင်ယခုစျေး ၀ ယ်ပါ အားသာချက်များ
ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများတွင်ပိုးသတ်ဆေးအကြွင်းအကျန်များ၊ လေးလံသောသတ္တုများ (သို့မဟုတ်အခြားအစွမ်းထက်သောအညစ်အကြေးများ) အတွက်မည်သည့်ရလဒ်မှမပါဝင်ပါ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများစာရင်းတွင် 'acrylic နှင့် hydrocarbon polymeric resins' တို့ပါ ၀ င်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်တွင် Hearty Heroes 'patch' 'ဒေါင်လိုက်ထုတ်ယူထားသောဒီဇိုင်း' ကိုဖော်ပြသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုမရှင်းပြပါ
ဒါတွေပါ Hearty သူရဲကောင်းများ Transdermal နာကျင်မှု Patches ၎င်းတို့တွင်တစ်ဖာလျှင် ၅၀ မီလီဂရမ်ပါ ၀ င်သောကြောင့်ဤစျေးသက်သာသောသုံးစုံတွင်ပါ ၀ င်သည်။
Hearty Heroes သည်သူတို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များကို California lab cannalysis မှကောက်ယူသည်။
ဒီထုတ်ကုန်အတွက်၊ Cannalysis သည်တစ်ဖာလျှင် ၅၁ မီလီဂရမ်ထက်ပိုများသည် မရ။ ၎င်းတို့သည် CBD ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ပြုလုပ်သည်ဟုဆိုလိုသည့်အခြားမည်သည့် cannabinoids ကိုမျှမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်မိုးသည်းထန်စွာသတ္တုများ၊ ပိုးသတ်ဆေးအကြွင်းအကျန်များ (သို့) အခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောညစ်ညမ်းမှုများအတွက်ရလဒ်များနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်များမထုတ်ပြန်ခဲ့ပါ။
(ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးထုတ်ကုန်များ၏တတိယအာနိသင်ရှိသည့် CBD ထုတ်ကုန်များကိုသာဖုံးလွှမ်းသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်မြွေအဆီမရခြင်းကိုသေချာစေနိုင်သည်။ ပိုကြိုက်ပါတယ် ပိုးသတ်ဆေးများနှင့်လေးလံသောသတ္တုများကဲ့သို့နောက်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များကိုထုတ်ပြသောကုမ္ပဏီများကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အလို့ငှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုအခြားစာရင်းများထက်ပိုမိုမြင့်မားစေခဲ့သည်။ ဒီရလဒ်တွေထဲကတစ်ခုခုရရင်ငါတို့ဒီသုံးသပ်ချက်ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်လိမ့်မယ်။ )
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့စဉ်သူရဲကောင်းများအကြား CBD ကိုပုံမှန်ဖြစ်စေရန်ကျန်းမာသောထုတ်ကုန်များကိုပုံမှန်အားဖြင့်မထီမဲ့မြင်ပြုသောအမျိုးအစားကိုနှစ်သက်သည်။
Hearty Heroes Transdermal Patches 3-Pack (50 mg ea) အချက်အလက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ပိုမိုရှာပါ။
နာကျင်မှုသက်သာစေသော CBD PLUS Lidocaine နှင့်အကောင်းဆုံး၊ Green Garden Gold PolarX CBD + Lidocaine Patch (240 mg စုစုပေါင်း CBD)
စျေးနှုန်း: ၂၉.၉၉ ဒေါ်လာ Green Garden Gold တွင်ယခုစျေး ၀ ယ်ပါ အားသာချက်များ
၎င်းသည် 4-pack ဖြစ်ပြီးဤစာရင်းတွင်စျေးအသက်သာဆုံး patch အချို့ကိုဖြစ်စေသည်
ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များသည် CBD မှ လွဲ၍ အခြားမည်သည့် cannabinoids ကိုမျှမတွေ့ပါ (ထို့ကြောင့်၎င်းသည် CBD ကိုသီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်)
ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ပိုးသတ်ဆေးအကြွင်းအကျန်များ၊ လေးလံသောသတ္တုများ (သို့) အခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောညစ်ညမ်းမှုများကိုမစမ်းသပ်ခဲ့ပါ
ဟိ အစိမ်းရောင်ဥယျာဉ်ရွှေ PolarX CBD + Lidocaine Patch ၎င်းသည်နာကျင်မှုကိုကုသရန်အထူးဖော်စပ်ထားသောကြောင့်၎င်းတွင် lidocaine ပါ ၀ င်သည်။
Lidocaine သည်ထုံဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည် ၎င်းသည်သင်၏နာကျင်မှုကိုသက်သာစေနိုင်သည်။
PolarX အမည်သည် lidocaine နှင့်ဆက်စပ်သောအအေးဓာတ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤအဖာတွင် Lidocaine ၏အာရုံစူးစိုက်မှု ၄ ရာခိုင်နှုန်းပါ ၀ င်သည်။
သို့သော်၎င်းတွင် patch တစ်ခုလျှင်အနည်းဆုံး ၆၀ မီလီဂရမ် CBD ပါ ၀ င်သည်၊ ၄၈ နာရီဆက်တိုက်အဆက်မပြတ် ၀ တ်ဆင်လိမ့်မည်။
၎င်းသည် ၄ ​​ထုပ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်အမိန့်နှင့် ၂၄၀ မီလီဂရမ် CBD ကိုသင်အမှန်တကယ်ရနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မီလီဂရမ်နှုန်းကိုသင်နှိုင်းယှဉ်သောအခါဤပိုစျေးသက်သာသော patch အချို့ကိုရရှိစေသည်။
သငျသညျအပိုဆု CBD အနည်းငယ်မီလီဂရမ်ရနိုင်သည်။ အရ အနောက်အလယ်ပိုင်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှပြုလုပ်သောဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ Green Garden Gold patch တစ်ခုတွင် ၆၅ မီလီဂရမ်ပါ ၀ င်သည်။
သို့သော်ဓာတ်ခွဲခန်းသည် CBD မှ လွဲ၍ မည်သည့်အပို cannabinoids ကိုမျှမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာဤထုတ်ကုန်ကိုအပြည့်အ ၀ spectrum လျှော်ထုတ်ယူခြင်းမဟုတ်ဘဲ CBD ကိုသီးခြားခွဲထုတ်။ ဖြစ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည် 'အခြွေအရံအကျိုးသက်ရောက်မှု' ကိုအသက်သွင်းရန်ပိုမိုခက်ခဲသည် (CBD သည်အပြည့်အဝရောင်စဉ်အခြား cannabinoids နှင့်အပင်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သည်ဟူသောသီအိုရီ) ဒါပေမယ့် lidocaine ကအဲဒါကိုပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်။
ဓာတ်ခွဲခန်းသည်လေးလံသောသတ္တုများ၊ ပိုးသတ်ဆေးအကြွင်းအကျန်များ (သို့) အခြားညစ်ညမ်းမှုများကိုစမ်းသပ်ရန်ပုံမပေါ်ပါ။ ဒါပေမယ့် Green Garden Gold ကသူတို့ကသူတို့ရဲ့ကော်လျှော်အားလုံးကိုကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်ကလယ်သမားတွေဆီမှာအော်ဂဲနစ်အလေ့အကျင့်နဲ့စိုက်ပျိုးပါတယ်။
Green Garden Gold 'PolarX' Patch (4 Pack; 60 mg အသီးသီး) အချက်အလက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ရှာပါ။
5. Nano-Particles နှင့်အကောင်းဆုံး၊ CBD Living Reservoir Patch (၁ ဖာ; ၆၀ မီလီဂရမ်)
စျေးနှုန်း: $ 15.00 CBD Living တွင်ယခုစျေး ၀ ယ်ပါ အားသာချက်များ
ဆေးကြောရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဆေးတန်းကော်ပြားကိုသင်သက်သာလိုသောနေရာတွင် (အရိုးအဆစ်များအနီးတွင်ပင်) ထားနိုင်သည်။
အထုပ်တွင် ၁ ဖာသာပါ ၀ င်သည်
ဤအရာသည် CBD အထီးကျန်လား၊ ကျယ်ပြန့်သော spectrum CBD လားဆိုသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါ။
အစေ့ထုတ်ပိုးမှုအပြည့်အ ၀ မပါသော (၎င်းတွင်သုည THC ပါ ၀ င်သည်)
သင် ၉၆ နာရီအပြည့်မ ၀ တ်ပါကဆေးပမာဏအပြည့်ကိုလက်လွတ်ခံနိုင်သည်
ဟိ CBD Living Reservoir Transdermal Patch (၆၀ မီလီဂရမ်) ၎င်းကို CBD ၏ nano-particles များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ထူးခြားသည်။ ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ၎င်းသည် ၉၆ နာရီအထိဝတ်ဆင်နိုင်သည်။
နာနိုအမှုန်များသည်ပုံမှန် CBD မော်လီကျူးများထက်သေးငယ်သည် သီအိုရီအရမင်းရဲ့အရေပြားအတားအဆီးကတဆင့်စုပ်ယူဖို့ပိုလွယ်နိုင်တယ် မရ။
CBD ၆၀ မီလီဂရမ်နှင့်ဤ patch ကိုသင်အလိုအပ်ဆုံးနေရာဖြစ်သောတသမတ်တည်းတည်တံ့ခိုင်မြဲသော CBD ဖြန့်ဝေမှုကို ၉၆ နာရီအထိဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
သူတို့ရဲ့ patch ကို flex လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာမို့မင်းရဲ့နာကျင်နေတဲ့အဆစ်တွေအနီးမှာတောင်မင်းရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုကပ်နိုင်ပါတယ်။
transdermal patches များသုံးခြင်း၏အဓိကအားသာချက်များအနက်မှတစ်ခုမှာ (CBD tincture ကဲ့သို့ CBD ပါးစပ်အားစားသုံးခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ၎င်းသည်ကွက်များသည်သင့်အားပိုမိုသက်သာစေသည်။ သင် cannabinoid ၏အနာကျက်ခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောအာနိသင်များကိုအပြည့်အ ၀ အကျိုးရှိဆုံးဖြစ်စေရန်သင်ထားသည့် patch ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားပါ။
ကြွက်တက်နေလား။ ၎င်းကိုသင်၏ဗိုက်ပေါ်တွင်ကပ်ပါ။ ပခုံးနာနေလား။ ဟိုမှာအဲဒါကိုရိုက်ပါ။
ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီလျှော်ရည်ရဲ့အသားကသင့်အရေပြားကိုတည့်တည့်ဖြတ်ပြီး ၀ င်လိုက်တိုင်းသင်အဆင်ပြေနိုင်တယ် အလွယ်တကူရနိုင်သောစမ်းသပ်မှုရလဒ်များ ၎င်းတွင်လက်ကျန်အရည်ပျော်များ၊ လေးလံသောသတ္တုများနှင့်ဓာတုဓာတ်ကြွင်းများအတွက်ရလဒ်များပါ ၀ င်သည်။
ရလဒ်များအရ patch တစ်ခုစီတွင် CBD ၆၆ မီလီဂရမ်ပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်ဓာတ်ခွဲခန်းသည်အခြား cannabinoids များ၏မည်သည့်အဆင့်ကိုမျှမတွေ့ရှိခဲ့ပါ၊ ၎င်းကို၎င်းကို CBD ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့၏အညွှန်းတွင် patch တွင်ကျယ်ပြန့်သောအစေ့ထုတ်ပိုးများပါ ၀ င်သည်ဟုဆိုသောကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသောအရာဖြစ်သည်။
(မွမ်းမံမှု - ကျယ်ပြန့်သောရောင်ခြည်သည်များသောအားဖြင့်အခြား cannabinoids များကိုရှာဖွေနိုင်သောအဆင့်တွင်ရှိနေသော်လည်း THC သုညဖြင့်ဖော်ပြသည်။ )
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်းလင်းချက်အတွက်ကုမ္ပဏီသို့ ဆက်သွယ်၍ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအမြန်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်လိမ့်မည်။
CBD Living 'Reservoir' Transdermal Patch (60 mg) အချက်အလက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ပိုမိုရှာဖွေပါ။
အကောင်းဆုံး CBD patch များကိုသင်မည်သို့ရွေးချယ်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယထုတ်ကုန်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများနှင့် CBD ထုတ်ကုန်များကိုသာပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ငါတို့ကမင်းရဲ့ CBD ကိုလိမ်လည်တဲ့ CBD ကုမ္ပဏီတွေကိုမင်းရဲ့ငွေကိုမဖြုန်းချင်ဘူး။
ဒါကြောင့်မင်းငါတို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ CBD ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွေကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာ ၀ ယ်သုံးနိုင်ပါတယ်။
သို့သော် (CBD နှင့် THC အကြောင်းအရာများကဲ့သို့) အာနိသင်စမ်းသပ်မှုသည်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရလဒ်များကိုမရယူနိုင်လျှင်၊aမှအချက်အလက်များဖြင့် ဘေးလူ ဓာတ်ခွဲခန်း၊ ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ကုန်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်မည်မဟုတ်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုးသည်းထန်စွာသတ္တုများ၊ ပိုးသတ်ဆေးအကြွင်းအကျန်များ၊ ကျန်ရှိသောအရည်ပျော်များနှင့် mycotoxins တို့ကိုစမ်းသပ်ရန်တတိယပါတီဓာတ်ခွဲခန်းများကိုချုပ်ဆိုထားသော CBD ကုမ္ပဏီများကိုမီးမောင်းထိုးပြလိုသည်။
ဤစာရင်းတွင်ထိပ်တန်း transdermal patch သုံးခုသည်ဤဖြစ်နိုင်ချေရှိသောညစ်ညမ်းမှုများအားလုံးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (COAs) ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ (ငါး ဦး စလုံးသည် CBD ၏ကြေငြာထားသောပမာဏကိုအတည်ပြုသောတတိယပါတီဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များရှိသည်။ ၎င်းတို့မပါလျှင်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မထည့်ပါ။ )
ကုမ္ပဏီကသူ့ရဲ့လျှော်မြစ်ကိုဘယ်မှာစိုက်ပျိုးသလဲ၊ သူ့ရဲ့လျှော်တောင်သူတွေကအော်ဂဲနစ်အလေ့အကျင့်ကိုလိုက်နာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သုတေသနလုပ်တယ်။ (ဤအချက်သည်အဘယ့်ကြောင့်အရေးကြီးကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကယခုရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးအော်ဂဲနစ် CBD ဆီအမှတ်တံဆိပ်များသို့ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ။ )
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏သုံးသပ်ချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံထုတ်ကုန်ကိုစမ်းသပ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့ကဂဏန်းတွက်စက်ကိုဖြုတ်ပြီးမင်းရဲ့ ၀ င်ငွေအကောင်းဆုံးပေါက်ကွဲမှုကိုသေချာအောင်၊ မီလီဂရမ်နှုန်းနဲ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့စျေးနှုန်းကိုနှိုင်းယှဉ်တယ်။
အသေးစိတ်အတွက်အထက်ပါ CBD patch ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတစ်ခုခုကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။
စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက် CBD ပြင်ဆင်မှုတွေကိုငါသုံးလို့ရမလား။
လုံးဝ! လူတို့သည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများအပြင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုမှသက်သာစေရန်ဤ transdermal patch များကိုသုံးခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
သင့်အတွက်သင့်တော်သောဆေးပမာဏကိုတွက်ချက်ရန်သင်စမ်းသပ်နိုင်သည်။ သင်ကကတ်ကြေးဖြင့်သေးငယ်သောဆေးများသို့လွယ်လွယ်ကူကူဖြတ်တောက်နိုင်သောကြောင့် patch များနှင့်စမ်းသပ်ရန်လွယ်ကူသည်။
ယခုစမ်းသုံးရန်အကောင်းဆုံး CBG ဆီထုတ်ကုန်များ
အကောင်းဆုံး CBD ဆေးတောင့်: သင်၏လွယ်ကူ ၀ ယ်ယူမှုလမ်းညွှန်
အကောင်းဆုံး CBD Tinctures: သင်၏လွယ်ကူ ၀ ယ်ယူမှုလမ်းညွှန်
ယခုရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးအော်ဂဲနစ် CBD ဆီအမှတ်တံဆိပ်များ
Brandon Ingram ဒဏ်ရာ: Lakers များအတွက်နောက်ဆုံးစာရင်းဇယား
၂၀၂၀ တွင်လာမည့်ဆေးအသစ် ၅ ခုအကြောင်းလေ့လာပါ
Buspirone vs. Xanax: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
သင်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေး mode မှာနေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရရမလဲ
နိုက်ထရိတ်များ - အသုံးပြုခြင်း၊ ဘုံအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
၉ အကောင်းဆုံးကာလအတွင်းခံအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ပုံစံများ၊ သင်၏ ၀ ယ်သူလမ်းညွှန်
အစီရင်ခံစာ - ၂၀၂၁ မူးယစ်ဆေးဝါးစျေးနှုန်းတိုးမြှင့်မှု၏စားသုံးသူအကျိုးသက်ရောက်မှု
Famotidine vs. omeprazole: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
မကြာသေးမီက FDA အတည်ပြုချက်တွင် opioid စွဲလမ်းမှု၊
အသက် ၄၀ ကျော်အတွက်အကောင်းဆုံးတားဆေး
ibuprofen ၂၀၀ မီလီဂရမ်ကိုသင်မည်မျှကြာအောင်သောက်နိုင်သနည်း
အစီအစဉ်bပြီးနောက်သင်မည်မျှကြာနိုင်သနည်း